Dimitar Berbatov oo kula taliyay Van de Beek inuu ka tago kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 27 Agoosto 2021. Weeraryahankii hore kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov, ayaa kula taliyay xiddiga reer Holland ee Donny van de Beek, inuu isaga tago naadiga Red Devils.
Xiddiga reer Holland ayaa ka qeyb qaatay kaliya 4 kulan xilli ciyaareedkii hore kooxda Man United horyaalka Premier League, kaddib markii uu uga soo dhaqaaqay Ajax Amsterdam xagaagii 2020, qiimo dhan 35 million pounds.
Weeraryahankii hore kooxda Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Uma maleynayo inaan arki doonno waqti dheeri ah uu ku ciyaaro Donny van de Beek.”
“Runtii waa xaallad la yaab iyo niyadjab leh, waxay ku bixiyeen ilaa 35 million pounds, waxayna lacagtaan ku bixiyeen ciyaaryahan aan ku bilaaban kulamo badan, wax macno ah ma sameyneyso.”
“Waxaan u maleynayaa haddii uusan ku faraxsaneyn, inay haboon tahay Van de Beek inuu ku cadaadiyo kooxda inuu baxo.”
“Booskiisa xulka qaranka ayaa halis ku jira, gaar ahaan hadda uu joogo Louis van Gaal, waa tababare anshax leh oo jecel ciyaartoydiisa inay ciyaaraan kubadda cagta.”
“Ma dhaleeceynayo ciyaaryahanka gabi ahaanba, laakiin aniga ahaan waa mid ka mid ah iibinta ugu niyadjabka badan abid, wuxuu leeyahay tayo badan.”
“Ma jecli marka ay kooxuhu wax u iibsanaayaan iska iibso oo kaliya, tanina waa mid ka mid ah xaaladahaas, Paul Pogba iyo Bruno Fernandes lagama taaban karo khadka dhexe ee Man United xilligan.”
“Scott McTominay, Fred iyo xitaa 33-jirka Nemanja Matic ayaa ka horreeya Van de Beek, waan ogahay sida uu darreemayo, waxay niyad-jab ku tahay ciyaaryahanka, wuxuu u baahan yahay inuu waqti dheer ka fikiro xaaladiisa iyo waxa uu doonayo.”